Jimmie Åkesson oo fadeexad weyn ku dhacay | Somaliska
Gudoomiyaha xisbiga cunsuriga ah ee Sverigedemokraterna (SD) Jimmie Åkesson ayaa waxaa la soo gudboonaatay fadeexad weyn ka dib markii shalay la soo bandhigay in uu ku qamaaray lacag aad u fara badan.
Idaacada Ekot ayaa soo bandhigtay in Åkesson uu sanadkaan ku qamaaray lacag gaaraysa 500 000 kr taasoo ka badan mushaarkiisa sanadka. Idaacada ayaa soo bandhigtay in mararka qaar Åkesson laga guulaystay lacag gaaraysa 50 000kr, isagoo aan ka harin qamaarka balse kumanaan kale ku sii qamaaray.
Åkesson ayaa markii wax laga waydiiyay arintaan ku jawaabay in ay tahay arin qaas ah, oo isaga iyo xaaskiisa ay si wada jir ah u wada qamaareen. Ka dib uu qirtay in arintaan ay tahay dhibaato maadaama lacagtu ay aad u badantahay. Khubarada qamaarka ayaa ku tilmaamay dabeecada Jimmie Åkesson mid xad dhaaf ah.
Sida ay arintaan u saameynayso doorashada ayaan wali cadeyn balse waxaa la ogaan doonaa maalinta axada in taageerada xisbiga SD ay hoos u dhacday iyo in kale.
Dhinaca kale, wargeyska Aftonbladet ayaa soo bandhigtay koox ka tirsan xisbiga SD oo baabuur iyo kaamiro la dhex wareegaya xaafadaha soo galootiga iyagoo ku sheekaysanaya “waxaan helay neger” iyo erayo kale oo ay kaga hadlaan dadka madoow iyo Soomaalida.
Fadeexadaha ka dhanka ah xisbiga SD ayaa isbuucyadii la soo dhaafay soo badatay balse waxaa muuqata in aysan wax badan iska badalin taageerada ay haystaan.
Laysanka baabuurka (körkort) oo noqday furaha shaqada
Rag Göteborg lagu xiray oo la sheegay in ay shabaab xiriir la leeyihiin
Sanadkaan haduu ka haro si kedis ah gelitaanka Barlamaanka Sweden, oo uu xubno ke heli waayo waa farxad. Balse xisbigaan mid kale ee waligiisna jireymuddo bada kaas oo ah Sveneskarna Partiet oo naasi ah ayaaba ka daran kan SD. Xisbigaan haweeney warqadihii xayeysiiska la taagneyd goobtaassax dukaameysiga ee magaalada Norrköping, ayaa arbacaddii warqadihii galanta iga saartay saa Waxaan arkay tilaabo bes markaan socdo dhaqaaqaan in xisbiga kii cunsuriga ahaa yahay ee anigaba jiritaankeyga iyo joojitaankeyga Sweden nibcaa, markaasan u soo taagay si aan ugu celiyo, galanta markay sooo taagatayna ayadoo dhinac dhinac ii firineysa ayaan horteeda ku jeexjeexay. Kana qaatay odey kale Soicial D ahaa lana sheekeystay, Irina waliba medlem ayaan noqonayaa, laakiin anigu MP ayaan vodka siiyey, siiba kan. Deegaanka deegaanka Lanstinigfulmaktiga. Saaxiib doorashada sida loo kala horeeya xiligaan xaggee ka ogaanaa walow tirintu bilaaban doonta kadis 18:30 saacada Sweden maantadan ugu danbeysa doorashadii Sweden ee 2015.